यी तीन स्टार अनमोल ,पल र प्रदीपको मध्ये कसको फ्यान धेरै हेर्नुहोस् – Bisal Chautari
यी तीन स्टार अनमोल ,पल र प्रदीपको मध्ये कसको फ्यान धेरै हेर्नुहोस्
- २१ माघ २०७४, आईतवार १३:४२ मा प्रकाशित
See which fan of these three stars Anmol, Pal and Pradip
काठमाडौँ, २०७४ माघ २१ आइतबार । सेलिब्रेटिहरुलाई सामाजिक सञ्जालबाट पनि को बढी लोकप्रिय छ भनेर छुट्याउने गरिन्छ । हुन त धेरै कलाकारहरूको फ्यानहरु धेरै छन् । तर पछिलो समय नेपाली चलचित्र क्षेत्रका नायकहरू पल शाह, अनमोल केसी र प्रदीप खड्का अभिनेताको क्रेज बढ्दो छ । उनीहरूलाई एकअर्काको प्रतिष्पर्धीको रूपमा लिइ्रन्छ । उनीहरूको परिश्र्र्मिकको विषयालाई लिएर पनि धेरै चर्चाको विषय बन्ने गरेको पाइन्छ ।
चोकको चटपटे पनिपुरी बेच्ने ठाउँमा पनि सुनिन्छ, अनोमोल, पल र प्रदिपको फ्यानहरुले आफ्नो फ्यानको तारिफ गरेको, यसरी जँहातहि यी नायकहरूको चर्चा परिचर्चा भइरहदा कसको बढी फ्यान फलोईङ होला त सबैको चासोको विषय पक्कै पनि बनेको छ । यी तीन स्टार मध्ये कसलाई बढी मन पर्छ ?, कसलाई बढी सामाजि सञ्जालमा बढी फलोईङ गरेको छ ?
आफूलाई को बढी मन पछै हामीले सामाजिक सञ्जालमा उसैलाई त हो नि फलोईङ गर्ने भनेको पनि, आज हामी कसको बढी फलोईङ फेसबुक र इन्स्ट्राग्राममा छ तपाईँलाई देखाउछै ।
पल, अनमोल र प्रदीप तीनै जना चक्लेटी अनुहारका छन् । आ आफ्नो फ्यानहरुले तीनै जनालाई फलोईङ गर्छन् । तीनै जनाको फ्यान धेरै केटिहरुने हुने गरेको छ । केटीहरूले बढी मन पराउने हुँदा केटाहरूले भने खासै मन नपराउने हुन्छन् । तर त्यो बाहिरी देखावाटि मात्रै हो आखिर राम्रो मान्छे त कसलाई मन पर्दैन र ? हुन त केटाहरुल नायिका र केटीहरूले नायक मन पराउनु त स्वभिककै हो ।
यी तीन स्टारकोे चलचित्र रिलिज हुँदा हलहरूमा थामी नसक्नु भिड जम्मा हुने गरेको पाइन्छ । तीनै जना चक्लेटी अनुहारका छन् । तीनै जनाको लेडिज फ्यान, फलोईङ धेरै छ । उनीहरूका फिल्मले राम्रो व्यापार गर्नुमा उनीहरूको क्रेज नै हो । तीनै जना अफ्नो स्टारडम बनाउँदै छन् । पछिल्लो युवापुस्तलाई नेपाली फिल्ममा आकर्षण गर्न पल, अनमोल र प्रदीपको महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलीरहेका छन् ।
कुनै पनि फिल्मले हिट हुन बलियो कथा र उत्कृष्ठ निर्देशनको आवश्यकता त पर्छ । र त्यासमा पनि कलाकारको ठुलो हात रहेको हुन्छ । प्रदीप खड्काको पहिलो फिल्म फ्लप भयो । दोस्रो फिल्म प्रेमगीत हिट भयो । तेस्रो फिल्म प्रेमगीत २ पनि सुपरहिट भयो । र अहिले लिलिबिलिको सुटिङमा ब्यास्त छन् ।
अनमोल केसीको फिल्म होस्टेल र त्यसपछिका जेरी, गाजलु, ड्रिम्स सबै सुपरहिट भए । आगामी फिल्म कृ पनि हिट हुने निश्चित छ । अहिले सम्मकै बहुपेक्षित फिल्म पनि हो । करिब दुई वर्ष लगाएर बनाएको कृ सबैको पर्खाइमा नै रहेको छ । यो अवधिमा अनमोलले अरू कुनै फिल्म पनि खेलेका छैनन् ।
म्युजिक भिडियोबाट राज जमाएर आएको पलले नाई नभन्नु ल चारबाट फिल्मको यत्र सुरु गरेको हो । छोटो समयमा नै पलले फिल्ममा पनि उतिकै लोकप्रियता कमाएको छ । नाई नभन्ननु ल चार, जोनि जेन्टलमेन्ट, म यस्तो गीत गाउँछु, फिल हिट भइसकेको छ भने शत्रु गते अब रिलिज हुने तयारीमा छ । यसले पनि राम्रो व्यापार गर्ने सबैले अनुमान गरेको छ ।
हामीले यी नै तीन पल, अनमोल प्रदीप स्टारको फ्यान फलोईङको मापन गरेका छौँ । कसको फ्यान कति भन्ने निश्चित गन्ती गर्ने वैज्ञानिक आधार त केही छैन । तर सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिले त्यसलाई केही सहज बनाएको छ । कुनै पनि व्यक्ति कति लोकप्रिय छ रु त्यो कुराको निर्धारण उसको फलोअर्सले जनाउँछ ।
फेसबुक लाइक पेजमा हेर्ने हे भने सबैभन्दा बढी अनमोलको १ लाख ४ हजार छ । पल, र प्रदीपको क्रमशः ८९ हजार र ८७ हजार रहेको छ । यसरी फेसबुक लाइक पेजलाई हेर्ने हो भने अनमोल पल भन्दा १५ हजार र प्रदिप भन्दा १७ हजारले बढी छ । पल र प्रदिप २ हजारले मात्र फरक देखिन्छ । लाइक पेज अन्या कलाकारहरूको तुलनामा कम नै देखिन्छ । नेपालको कलाकार मध्ये सबै भन्दा बढी लाइक पेज रेखा थापाको हो । उनको ३२ लाख फेसबुक लाइक पेज रहेको छ ।
त्यास्तै फेसबुक प्रोफाइलाई हाने हो भने सबै भन्दा बढी पल शाहाको रहेको छ । उनलाई फेसबुक प्रोफाइलमा एक लाख सात साय छह्यत्तर जनाले फलोईङ गरेका छन् । दोस्रोमा अनमोललाई ८३ हजार ७८ जनाले फलोईङ गरेका छन् । भने प्रदिपलाई ६७ हजार ७८ जनाले फेसबुक प्रोफाइलमा फलोईङ गरेका छन् । प्रदिपले भरखरै लिलिबिलिको गीत इज इँट लभ सार्वजानिक गर्दा पत्रकार सम्मेलनमा नै फेसबुक नचलाउने घोषणा समेत गरेका थिए ।
अब लोगै इन्स्ट्राग्राममा, इन्स्ट्राग्रामको पनि लोकप्रियता नेपालमा धेरै बढेको पाइन्छ । कलाकारहरू इन्स्ट्राग्राममा पनि धेरै सक्रिय भएको पाइन्छ । त्यासैले आफूले मन पराएको कलाकारहरूलाई इन्स्ट्राग्राममा पनि उतिकै फलोईङ पाइन्छ । अनमोल, पल र प्रदिपको इन्स्ट्राग्राममा हेर्दा सबैभन्दा बढी लोकप्रिय अनमोल देखिन्छ । उनलाई १ लाख ८६ हजारले फलोईङ गरेका छन् । पल र प्रदिपलाई ५२ हजार छ सय बराबरीले गेरेका छन् । इन्टाग्रममा भने पल र प्रदिपको भन्दा अनमोलको फलोईङ धेरै बढी देखिएको छ । पल र प्रदिपको भन्दा अनमोलको त्रिपल नै बढी देखिएको छ ।
यसरी फेसबुक लाइक पेज, फेसबुक प्रोफाइल र इन्टाग्राम तीनैवटामा हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी फ्यान अनमोलको भएको देखिन्छ । त्यास्तै दोस्रोमा पल र तेस्रोमा प्रदिप रहेको देखिन्छ ।